I-Al Ciani Balcony Suite - iziko laseLugano
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguKristina
IAl Ciani yindawo ephezulu ye-bijoux yale mihla enebalcony, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nefenitshala epholileyo. Ifakwe kwisakhiwo sembali embindini wesixeko, iAl Ciani ibonelela ngombono omangalisayo ukusuka kwibalcony yaseParco Ciani, eMonte Bre kunye nechibi laseLugano.
Iindawo zokutyela, iibhari, iKhasino, iibhaka, isaluni zeenwele, igrosari kunye neendawo zokuthenga zikufuphi.
Yindlu ephezulu kumgangatho ophezulu, enombono obalaseleyo wepaki, iMonte Bre kunye nenxalenye yechibi laseLugano. Ukuba sembindini wesixeko- zonke izibonelelo ezifana neendawo zokutyela, iibhari, indawo yokuzivocavoca, iibhaka, iisaluni zobuhle, i-casino, iivenkile ezithengisa ukutya kunye neendawo zokuthenga zikufuphi nayo. I-Apartment yayiyilelwe indawo yokuhlala ekhululekileyo yeshishini kunye nabahambi bezolonwabo, kodwa isofa eyongeziweyo (ubukhulu boKumkani okanye iibhedi ezimbini ezingatshatanga), indawo yokuhlala ngokukhululekileyo abahlobo kunye nosapho ngokufanayo.
Ifakwe kumbindi wedolophu ungaphonononga uninzi lweendawo ezinomtsalane zeLugano ngeenyawo, ukonwabele iindawo zayo zokutyela ezikumgangatho ophezulu kunye neebhari ezibonelelwayo kunye nokwenza imisebenzi yezemidlalo kwiParco Ciani edumileyo okanye ngasechibini, zombini kwiimitha nje ezimbalwa ukusuka kwipropathi. .
I-Lake promenade, ubushushu beMeditera, iimbono ezintle kunye nekhalenda egcweleyo yemisitho, zonke zimema iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela ukuba zize kule kona imangalisayo yaseSwitzerland.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nokuba ngeposi okanye ngefowuni
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Italiano, Русский